AREWA/BIAFRA-EDWIN CLARK KAGBURU ATUMATU HA - Isimbido
Previous GỌỌMENTI ANAMBRA GA-EME KA AMỤMA N20M MMEPE IME OBODO BAA N’USORO ỌCHỊCHỊ
Next NDỊ IGBO BI NA REGINA, KANADA, EMENA MMEMME “UBOCHỊ NDỊ IGBO” NKE AFỌ 2017
AKUKO UWA, Hot News, KA ANYI GBA EGWU, OCHIE DIKE
AREWA/BIAFRA-EDWIN CLARK KAGBURU ATUMATU HA
Onye ndu obodo Niger Delta onye amara ọfụma Mazi Edwin Clark, muchiri anya were kagbue atụmatụ ndi Biafra nke onye ndu ha bụ Mazi Nnamdi Kanu, Clark kwuru na Nnamdi enweghi ezigbo nghọta na ezigbo ọnụ mmiri okwu iji wee jee ije Biafra.
Clark kagbụkwara atụmatụ kwara puọ ugbua ndi otu Arewa nyere ndi igbo bi n’ugwu hausa. Ọmere ka ihe di ya n’obi puta ihe mgbe onye isi ọche otu Senate Committee na ihe ime obodo na Ụgwọ eji Mba Ọzọ (senate committee on local and foreign debt) Senator Shehu Sani, biara lete ya n’ebe obibi n’Abuja.
Clark mekwara ka-amara na nhazi obodo Nigeria bụ nani ihe otu ọbụla kwesiri ịna eche, ọbụghi nkewa ma ọbụ ịna eche atụmatụ agha. Ihe ndia ga eme obodo Nigeria anọrọ na ọgba-aghara nke ukwuu.
Okwuru na mgbe Nnamdi Kanu n’ekwu maka Baifra na ọna ekwu ihe abaghi n’ihe ma ọbụ ihe enweghi isi. Anyi achọghi agha nke ugboro abụọ, Mba America lutere agha-aka mana ugbua ha anaghi echekwa ịlụ agha ọzọ, ọna ariọ Kanu ka ọkwụsi garagara Biafra.
Clark si na ọbụ mpako n’amaghi ihe n’ebe ụfọdụ ndi ntorobia nke ugwu hausa nọ, maka iwu kwara puọ ha nyere ndi igbo bi n’be ha. Ọsi na ha abụghi ndi nwe ugwu hausa mana mpaghara ahụ bụ otu n’ime obodo Nigeria nke mere na onye ọbụla nwere ike ịbi ebe ahụ.
Ọsikwa na ndi igbo ebiala n’mpahara ugwu hausa ihe kariri otu nari afọ (100years), Clark si na ọkagburu atụmatụ kwara puọ ahụ.
Mazi Edwin Clark were n’akpọ oku ka enwee ezigbo atụmatụ ka-aga esi hazie ma nwogharia obodo Nigeria maka ọdinma onye ukwu na onye nta bi n’ime obodo Nigeria.
Biko ịchọrọ imata nke ọma maka akụkọ a n’ndi ọzọ so ya, biko soro anyi na ọha nta akụkọ anyi di iche iche (@isimbido.tv) ma ọbụ www.isimbido.tv , dalunu ọha na eze.
OKOROCHA GWARA OSHIOMHOLE: MATA KA ESI EKWU OKWU
MMETỌ GBURUGBURU EBE OBIBI GI